Forum serasera malagasy Misy vehivavy sahy mitanjaka - Dinika forum.serasera.org
Misy vehivavy sahy mitanjaka
Fitohizan'ny hafatra : Misy vehivavy sahy mitanjaka
rakotobe425 - 17/10/2013 08:58
Tamin'ny roa volana lasa aho nifanena taminà vehivavy avy any ambanidia. Teo amin'ny làlana mankany amin'ny mpitsabo mitambatra no nahitako azy. Manao bas collant marron tena manify ka tena hita be mihitsy ny fivaviany satria fohy koa ny akanjo nanaovany. Toy ny olona hanao firaisana no nahitako azy. Raha teo am-pandriana de milay fa eny an-dàlan de hafahafa.
Niherikerika dia nitsoatsoaka daholo ny bandy.Hay moa matahotra olona mitanjaka ihany.
mirananirina - 18/10/2013 19:12
Gravy indray izany, izaho izao nieritreritra hoe nanaraka azy daholo ny bandy
mpisotrtoaka - 14/01/2014 10:02
Ka sarimbavy kay le izy d nitsoaka ry mamba isany
hery - 22/01/2014 09:49
Mitsoaka ny bandy satria sur fa olona adala izany
Dreamlover14 - 23/10/2018 20:19
Ho antsika mahalala quartier eo Ambodifilao, misy resto viet-namien Kim long izay eo ary misy elakela-trano anankiroa na 3 miakatra tsy lavitra eo mankany Ambondrona.
Maika ny hiakatra tany Ambondrona aho ka nandray ilay elakelatrano tena zara raha misy afaka hifanenan'olona 2 mihorirana. Teo @ ilay hiditra ilay elakela-trano indrindra aho no io teo anoloako mbola ambonimbony misy vehivavy mamany tsara teo ary mitodika tsara aty ambany tazan'ny masoko tsara ny foufoune-ny.
Izaho efa maika iny sady tezitra aho nahita ity vehivavy toa mba manana ny maha-izy azy nefa dia manao makota. Ekeko fa poritra angamba izy fa izaho koa maika ka dia notazaniko teo mandra-pahatapitr'ilay amany. Sady tsy afaka nanajanona izy satria angamba vao nanomboka namoaka ka dia nifampitazana teo izahay, izy sady tera-tsemboka noho ny hamenarana, izaho nataoko hitany tsara hoe mandinika ilay foufoune mamoaka ilay pipi. Efa 1 minitra mahery vao vita izay nataony fa tsy nahavita nifafa akory ilay olona fa ny slip-ny no nampiakariny haingana ary tsy te hijery ahy akory nony nidina izy.
Soa fa t@ mbola tsy naditra fa raha tsy izany mety nanaovako proposition indécente teo ilay madama kely, ary soa fa tsy mbola nisy smart phone fa mety efa nandeha facebook koa ilay video-ny.....
Page rendered in 10.3369 seconds